डडेल्धुरा जिल्लामा मौरीपालन किसानले मनग्गे आम्दानी गर्न थालेका छन् । दुई वर्षको अवधिमा सात हजारको सङ्ख्यामा घार बिक्री गरिसकेको र खाली घारको दुई हजार ८ सय देखि तीन हजारसम्ममा बिक्री गर्ने गरेको आलिताल मौरीघारका प्रोप्राइटर मनी गिरीले घार व्यवसायबाटै पर्याप्त आम्दानी भएकोे बताए। घार व्यवसायबाट नै मासिक दुईदेखि तीन लाखसम्म बचत हुने गरेको उनको भनाइ छ । आलिताल मौरी घार[Read More…]
by GreenKhabar —	April 11, 2017 —	0 comments —	मूलपेज, हरित उद्यम, हरित खबर
संविधान संसोधन कुवेलाको सहनाई ः खनाल
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको वातावरण बनाउन लाग्नुपर्नेमा संविधान संसोधनको रटान लाउनु कुवेलाको सहनाई भएको पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बताउनुभएको छ । नेकपा एमाले ललितपुर महानगरपालिका २३ नं वडा कमिटिले आयोजना गरेको नव वर्ष शुभकामना आदान प्रदान तथा पार्टी प्रवेश समारोहमा वोल्दै नेता खनालले सरकारलाई खुट्टा नकमाई निर्वाचनको वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ । बरिष्ठ नेता खनालले[Read More…]
by GreenKhabar —	April 10, 2017 —	0 comments —	मूलपेज
२० किलोमिटर सडकमा साइकल लेन बन्दै
स्वदेशी पर्यटकमाझ पनि साइक्लिङ गर्ने चलन बढेको पाइन्छ। साइक्लिङको कल्चर पछिल्लो समय बढेर गएको व्यवसायीहरु बताउँछन्। यद्यपी सडक मैत्रीपूर्ण भएमा राजधानीमा साइक्लिङ गर्ने क्रम निकै बढ्ने र त्यसले पर्यटन क्षेत्रको विकासमै टेवा पुग्ने पर्यटन व्यवसायीको बुझाई छ। काठमाडौंका सडक साइकलमैत्री छैनन्। जसले गर्दा यहाँ आउने पर्यटकले साइकलमा घुम्न चाहे पनि यतिबेला सडक बाधक बन्ने गरेको छ। अर्कोतर्फ अझै पनि नेपालीमा[Read More…]
by GreenKhabar —	April 6, 2017 —	0 comments —	मूलपेज
दक्षिण ललितपुरमा लौठसल्लाको लहर
दक्षिण ललितपुरको महाङ्काल गाउँपालिकाका स्थानीयले जंगलमा पाइने लौठसल्लाको व्यावसायिक खेती गरिरहेका छन् । लौठसल्लाबाट राम्रो फाइदा हुने भएपछि दक्षिण ललितपुरको गोटीखेल तथा आसपासका क्षेत्रमा यसप्रतिको आकर्षण बढेको हो । क्यान्सरको औषधी बनाउन प्रयोग हुने टेक्सस मेरी नामक पाउडर यसबाट प्राप्त हुने भएकाले यसको माग बढेको हो । लौठसल्लालाई स्तन तथा पाठेघर क्यान्सरको उपचार गर्ने जडिबुटीको रूपमा लिइन्छ । गोटीखेल इलाका[Read More…]
by GreenKhabar —	April 6, 2017 —	0 comments —	मूलपेज, सफलताको कथा, हरित उद्यम, हरित खबर
रामपुर नगरपालिका–६ तालपोखराका नारायणप्रसाद भण्डारी तरकारीबाट यथेष्ट आम्दानी गर्छन् । उनी अहिले तरकारी बेचेर मासिक एक लाख ५० हजार बराबरको आम्दानी लिन सफल भएका छन् । करिब २५ वर्षसम्म भारतमा काम गरेर फर्कनुभएका भण्डारीले व्यावसायिक रुपमा तरकारीखेती गरेर जिल्लाकै नमुना कृषकका रुपमा चिनिन्छन् । “जीवन जिउने आधार नै तरकारी खेती बनेको छ,” उनले भने– “यही व्यवसायबाट दाम र नाम मिलेको[Read More…]
मन्त्रीपरिषद्को षड्यन्त्रविरुद्ध निर्माण व्यवसायी आन्दोलित
ललितपुर । मन्त्रीपरिषद्को ०७३ फागुन २६ को निर्णयलाई षड्यन्त्र मान्दै नेपालका निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । मन्त्रीपरिषद् वैठकले निर्वाचनको मिति तय भएपछि निर्वाचन प्रभावित पार्न १ करोडसम्मका आयोजनाहरु उपभोक्ता समितिबाटै संचालन गर्न पाउने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संसोधन गरेको थियो । खरिद नियमावलीले उपभोक्ताहरुले नै हेभी इक्वीपमेन्ट प्रयोग गरी काम गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ भने उपभोक्ता समितिमा निर्माण[Read More…]
by GreenKhabar —	April 5, 2017 —	0 comments —	मूलपेज, हरित खबर
निर्वाचन आयोगले ७५ जिल्लाकै जिल्ला न्यायाधीशहरुलाई शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी मुख्य निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको छ। एकभन्दा बढी जिल्ला न्यायाधीश रहेको हकमा सबैभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गरिएको छ। न्याय परिषद्को परामर्शमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र न्याय सेवा आयोगको परामर्शमा नेपाल न्याय, कानुन र सरकारी वकिल र प्रशासन समूहका ६६९ अधिकृतहरुलाई आयोगले जिम्मेवारी तोकेको हो । आयोगको सोमबार[Read More…]
by GreenKhabar —	April 4, 2017 —	0 comments —	दस्तावेज, मूलपेज
आलु संसारको सबै भुभागमा प्रयोग गरिन्छ । आलु तपाईले प्रत्येक घरको भान्सामा पाउन सक्नु हुन्छ । आलु हाम्रो मुख्य खानेकुरामा पर्छ । अझ भन्नु पर्दा आलुलाई त तरकारीको राजा नै मानिन्छ । तर, के तपाईलाई आलुका प्रकारका बारेमा थाहा छ त ? आलुको रंगरुप कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । तर तपाईले कहिल्यै बिचार गर्नु भएको[Read More…]
by GreenKhabar —	April 4, 2017 —	0 comments —	मूलपेज, स्वास्थ्य, हरित उद्यम, हरित खबर
गरे के सम्भव छैन ? पसिना बगाए स्वदेशमै पनि मनग्गे आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने उदारण बनेका छन् बनेपा १० का भोजराज तिमल्सिना । उनले एक करोड रुपैयाँ लगानीमा व्यावसायिक पुष्प खेती गर्दै आएका छन् । सामान्य परिवारमा जन्मिएका तिमल्सिनाले एक करोड एक लाख ७३ हजार रुपैयाँ लागतमा १६ रोपनी क्षेत्रफलमा व्यावसायिक पुष्प खेती गर्दै आएको बताए । ‘निम्नवर्गीय परिवारमा जन्मे[Read More…]
by GreenKhabar —	April 4, 2017 —	0 comments —	मूलपेज, सफलताको कथा, हरित उद्यम, हरित खबर